ငြိမ်းချမ်း| October 15, 2012 | Hits:4,559
သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ် (၂)ကင်ဆာအကြောင်း တစေ့တစောင်းသူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ်မီးမမှန်ပေမယ့် ဓာတ်လိုက်တတ်တယ် သတိထားဓာတုပစ္စည်း ပါဝင်သော တရုတ်လုပ် အစားအသောက်များ အရေးယူမှု အားနည်းနေ
Aung Zaw Oo October 16, 2012 - 9:45 am ကို မိုးသီးဇွန်ပြောတဲ့စကားလေးတွေကို ပြန်သတိရမိပါတယ်။ ဂျာမနီ နာဇီလက်ထက်တုန်းက ပြည်သူတွေအားလုံး ဟစ်တလာ နောက်ကရူးသွားသလို မြန်မာ ပြည်သူတွေကလည်း ရူးသွားနေပြီးလား။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ UN ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံ မဟုတ်ဘူးလား။
Reply Joe Nay Joe October 16, 2012 - 7:56 pm 96% of population in Maungdaw are Rohingya… Rakhine comprises of only 4%… if AZG treat 90 Rohingya and 10 Rakhine, how come AZG taking Rohingy’s side? NGOs work is to help the needy one.. Rohingya need their help as they can’t move from village to village without permit….all the rakhine mogh got mad…. foolish people in deed!!
Reply Thomas chang October 16, 2012 - 8:26 pm What is your point?Do you have your own word?
Reply K October 17, 2012 - 2:50 am ရခိုင်ကိုတောင်ရောက်ဖူးရဲံ့လား
Reply kotoe October 18, 2012 - 10:43 am aung zaw oo who is moe thi zon?Did you know him ?and what did he do?If you like to know please come to mae sod you must know all.Just he talk didn’t work all ABSDF have known.
Reply mr TM October 24, 2012 - 9:01 pm AZGဆေးခန်းကိုရခိုင်ပြည်မှာမဖွင့်ဖို့ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့တားဆီးချက်ကဘင်ဂါလီလူမျိုးတွေကိုမကူညီစေချင်လုိ့ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။OICနဲ့UNကစေလွတ်တဲ့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကိုလည်းဘင်ဂါလီတွေကိုပိုပြီးကူညီလို့ဆိုပြီပိတ်ခိုင်းတယ်။ဒါတွေဟာလူသါးခြင်းမစါနာတဲ့ရိုင်းဆိုင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေဘဲရခိုင်ဒုက်ခသယ်တွေကိုကြတော့အစါးအသောက်ပြေ့ပြေ့စုံစုံပေးနေပြီးဘင်ဂါလီတွေကြတော့မလိုအပ်သလိုဘက်စုံကနေပြီးပိတ်ပင်နေတာကလူမဆန်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဗိုလ်သိန်းစိန်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုဖြစ်စေချင်နေတာဘဲ။တရားဥပဒေစီုးမိုးရေးဆိုတာမြန်မာပြည်မှာအခုထက်ထိမရှိသေးပါဘူ။